अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिलेको राष्ट्रिय बल र एकता उल्लेख्य छ । अहिलेकै जस्तो परिपक्वता अबको कूटनीतिक संवादका क्रममा पनि जरुरी छ ।
महिलालाई अनलाइन जुवामा फसाउने चिनियाँको धन्दा !
उनीहरुलाई चिनियाँ डेटिङ साइटमा गएर एकल वा पारपाचुके गरेका महिलाहरुलाई पछ्याउन र कम्पनीले डिजाइन गरेको अनलाइन जुवा खेल्न उक्साउन सिकाइयो ।
ठूला नेताहरुसँग चिनियाँ अपराधीको सेटिङ्ग !
काठमाडौं, १५ पुस । गत साता प्रहरीले पक्राउ गरेका १ सय २२ जना चिनियाँमाथि अनुसन्धान नै नगरी चीन पठाउने तयारी भएको छ । आगामी शनिबार चार्टड विमानमार्फत् उनीहरुलाई चीन पठाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
भारतकै लगानीमा डीपीआर पनि बनाइदिन आग्रह
काठमाडौं, १२ पुस । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन नेपालले भारतसँग प्रस्ताव पठाएको छ । यसको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले यसअघि नै नेपाललाई दिइसकेको छ ।
पाकिस्तानमा थप संकटको सम्भावना
पूर्व सैनिक शासक मुसर्रफलाई एउटा प्रान्तीय अदालतले मृत्युदण्डको निर्णय ग¥यो । त्यसो त हाल उनी युनाइटेड अरब इमिरेट्समा गम्भीर बिरामी भएर उपचार गराइरहेका छन् । कुनै बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भट्टोलाई सेनाले फाँसी दिएको थियो भने अहिले सिभिल अदालतको पूर्व सैनिक प्रशासकलाई मृत्युदण्ड सुनायो ।
बौद्ध धर्मावलम्बीलाई दबाउने चिनियाँ नीति
तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्वीहरूलाई लामो समयदेखि दबाउँदै आएको कम्युनिष्ट चीनले सिञ्जियांग प्रान्तका लाखौं उइगुर मुश्लिमहरूमाथि समेत दमन–चक्र चलाएको प्रति नेपाल रिपब्लिक पार्टी तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दछ ।
सीमा विवाद : सरकारको असक्षमता
काठमाडौं । भारतसँगको सम्बन्ध बन्छ कि बिग्रन्छ पत्तो छैन । तर जुन किसिमले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर सीमाको समस्या समाधान गर्नु पर्ने थियो त्यसमा पहल नगर्दा भने सम्बन्ध बिग्रने खतरा छ ।
कोरोनापछि कृषिकै आश
कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहले विश्वव्यापी रूपमा त्रास निम्त्याएको छ । नेपाल पनि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ र यो बैशाख २५ गतेसम्म जारी रहनेछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा के/कस्तो दुष्प्रभाव पार्ला भनी अनेकौं आर्थिक प्रक्षेपण भइरहेका छन् ।
काठमाडौं । चीन तर्फ एक सय वटा मात्र पिलर राखिएका छन् । चीनतर्फ भौगोलिक विकटताको कारण कम पिलर राखिएको हुन सक्ने नापी विभागका कर्मचारीहरु बताउछन् ।
आतंकवादी संगठनहरूलाई सघाउँदै पाकिस्तान !
मुम्बईमाथि २६/११ मा भएको आक्रमणको एक दशक पछि पाकिस्तान पूर्ववत् सक्रिय भूमिका गर्न थालेको छ । पाकिस्तानका राजनीतिक नेतृत्वले आतंकवाद पुनर्जीबिनका लागि चुनौती भै सकेको कुरो आत्मसात गरी सकेको छ ।
कोरोना कहर : प्रदेश सरकारको कमजोर भूमिका
चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान क्षेत्रमा गत डिसेम्बर ३१ मा पहिलोचोटी फेला परेको कोरोना भाइरसले आज विश्वलाई भयभीत, त्रसित र स्तब्ध बनाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिंगो विश्वकै मानव समाज इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा पुगेको छ ।
नेपाली अध्यागमनलाई बद्नाम गराउन अमेरिकी रिपोर्ट
काठमाडौं, १९ मंसिर । अमेरिकाले गत महिना सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले ठूलो हंगामा भयो । नेपाल अन्तराष्ट्रिय अपराधीको हब भएको भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ ।
कामको बहानामा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको लोमान्थाङमा प्रवेश
मुस्ताङ, १२ मंसिर । तीन वर्ष अघि चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा लोमान्थाङ बजारका लागि उपलब्ध २४० किलोवाटको सौय उर्जा सोलार बत्ती सञ्चालनमा छ ।
आतंकवादसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदन : पाकिस्तान आत्तियो
अमेरिकी विदेश विभागले नोभेम्बर १, २०१९ का दिन सार्वजनिक गरेको सबभन्दा पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८’ मार्फत पाकिस्तानमाथि यो आरोप लागाएको छ कि एकातिर उसले अफगानिस्तानमा राजनीतिक सहमतिका लागि सहयोग गर्ने वाचा गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसको ठीक विपरीत आतंकी गतिविधि संचालन गर्दै आएको पाकिस्तानस्थित रहेको सुरक्षित स्थालबाट समेत अफगान तालिवान र हकानी (नेटवर्ग) संगठनमाथि कुनै प्रतिबन्ध समेत लगाएको छैन ।
निशुल्क माटो जाँच तथा किसान–विज्ञबिच अन्तरसंवाद कार्यक्रम बुलिंगटारमा सम्पन्न
बुलिंगटार गाउँपालिकास्तरीय माटो जाँच शिविर २०७६ साल जेठ ११ गते बुलिंगटार नवलपुरमा सम्पन्न भएको छ । खेतीपाती गर्दा कुन खेतीलाई प्राथमिकता दिने र माटोको गुणस्तर मापन गरी किसानलाई माटो तथा रोगविज्ञबाट उचित सरसल्लाह दिने उद्देश्यले सो शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।
मधेशको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि सहि नेतृत्व गर्न डा. राउतको आह्वान (विचार)
डा. सीके राउतको मधेश र देशप्रतिको त्याग, बलिदान र योगदान आजको अचानक होइन, उहाँले मधेशका पार्टी र नेताहरुलाई दशकौं पहिलादेखि नै एकजुटताका लागि कोसिस र प्रयासहरु गर्दै आउनुभएको थियो ।
असारसम्म ब्लडमनि नतिरे फाँसीको सजाय पाएका जलेश्वर चौधरीको घर पुगेर फर्किदा...
साउदी अदालतले जलेश्वर चौधरीलाई ८ महिनाभित्र ब्लडमनि नतिरे फाँसीको सजाय सुनाएको छ । तर ब्लडमनि तिरेमा उनको सजाय माफ हुनेछ ।
निको नहुने रोगको भूमरीमा अथाह दुःख कष्टका साथ जीवनमा जिउने भन्ने मैले अठोट गरिसकेको छु
महोत्तरी, १७ मंसिर । महोत्तरी गौशाला–१ का ३६ वर्षीय धनेश्वर महतोको शरीरभरि नै मासु पलाएको छ । उनको शिरदेखि पैतलासम्म जताततै मासुको पोको (डल्लो) पलाएको छ । उनको शरीरमा मकैको दानादेखि आलुजस्ता मासुका थैला रहेका छन् ।
अपाङ्गताले रोकेन स्वरोगार बन्न
बर्दिया, २५ कार्तिक । कुनै बेला घरपरिवार र समाजले बोझको रूपमा लिँदै हेला गरी अमानवीय व्यवहार खेप्दै आएका मधुवन नपा–२ ओराली बजारका अपाङ्गता भएका दम्पती स्वरोजगार गर्दै आत्मसम्मानका साथ जिउन सफल भएका छन् ।
चितवन, १४ कार्तिक । मनकामना दर्शनका लागि भारतीय पर्यटक आउने क्रम वर्षेनी बढ्दो रहेको छ ।
बाराका २२ वर्षे युवाको प्रतिभा : चराजस्तै मान्छे उड्ने यन्त्र र विद्युत उत्पादन गर्ने सपना
‘अटोमेटिक पावर मेसिन’ पनि उनले बनाएका छन् जुन अहिले विश्वमै छैन । यसलाई एक पटक स्टार्ट गरे पछि बिना इन्धन ५ वर्षसम्म विजुली उत्पादन गर्नसक्छ । यसको क्षमता हजार वाटदेखि सय किलो वाटसम्मको हुन्छ । यो मेसिनको प्रयोगबाट घर, कार्यालय, उद्योगमा विजुली बाल्न मिल्छ, त्यो पनि बिना इन्धन । यदि तपाईंले यो मेसिनको प्रयोग गर्नुभयो भने नेपाल सरकारबाट बिजुली किनिरहनु पर्दैन । ‘यो मेरो चुनौती हो, यसको उपयोगबाट बत्तिको पैसा तिर्नु पर्दैन, उद्योग चलाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।
बारामा ५० वर्षपछि जातीय विभेद अन्त्य
अनिल गुप्ता, बारा । बाराको इतिहासमा पहिलोपल्ट ५० वर्ष पछि जातीय विभेद अन्त्य गरी सिम्रौनगढ नगरपालिकामा वडा नं.७ झवानीस्थित महादेव मन्दिरमा दलित तथा गैर दलितले शिव मन्दिरमा प्रवेश गरी पुजापाठ गरेका छन् ।